Tsy misy toerana na alahelo na tahotra ao an-tsain'izay mitady fahatsiarovan-tena mihoatra ny zavatra rehetra.
Vol. 1 APRIL, 1905. Tsia
Ny TOKONDRANA dia foto-kevitry ny lohahevitra rehetra izay tokony hianarana, ary izay tokony ho fantarina raha toa ka manao fandrosoana marina ny olombelona. Noho izany dia ny fahatsiarovan-tena no foto-kevitra hodinihintsika.
Ny fahatsiarovan-tena dia ny fiaviany, ny tanjona ary ny fiafarana isaky ny rafitra filozofia, siansa, na fivavahana. Ny zavatra rehetra dia manana ny fahatsiarovan-tena ary ny faran'ny olombelona rehetra dia fahatsiarovan-tena.
Ny fanontaniana momba ny fahatsiarovan-tena dia foana ny famoizam-po ataon'ireo manam-pahaizana. Ny sasany dia nanandrana nanary ny foto-kevitra tamin'ny filazany fa ny fahatsiarovan-tena dia vokatry ny fihetsika mahery sy raharaha. Ny sasany dia nitazona fa ny fahatsiarovan-tena dia mibahana ny hery sy ny raharaha, ary koa milaza fa na dia ilaina amin'ny roa tonta aza dia mahaleo tena io ihany. Ny sasany kosa nilaza fa tsy lohahevitra ahafahana maminavina tombony izay tombony azo amin'izany.
Amin'ny resaka rehetra, ny fahatsiarovan-tena no tena mahay manavaka. Manome valiny azo ampiharina indrindra ny fianarany. Amin'izany no hahatratrarantsika ny idealy avo indrindra. Amin'ny herin'izany dia azo atao ny zava-drehetra. Ny fahatsiarovan-tena fotsiny dia miankina amin'ny fisian'ny fiainantsika sy ny maha-izy antsika. Raha tsy misy izany dia tsy hahalala na inona na inona izao tontolo izao iainantsika na tsy ho haintsika fantarina hoe iza ary isika.
Ny zavatra ananantsika amin'izao fotoana izao dia tsy ny teny hoe fahatsiarovan-tena ihany, fa eo amin'ilay toerana ijoroan'ny teny fahatsiarovan-tena. Ny fahatsiarovan-tena dia tsy zavatra mahatsiaro. Ny mahatsapa fotsiny dia noho ny fahatsiarovan-tena, izay fanehoana azy.
Ny fahatsiarovan-tena dia io zava-misy iray izay ianteherana ny zava-drehetra, saingy matetika dia tsy manisy lanjany ny lanjany isika fa tsy amin'ny fofona manelingelina na maimbo zava-mitranga. Angamba noho ny fanaontsika lalandava amintsika hatrany dia ataontsika mitarika azy io izy io ary mitondra azy ho laharana faharoa na miankina. Raha tokony hanolotra ny fanajana, ny fanajana, ny fanompoana noho izany ary io irery ihany; Angamba tsy manao sorona ho an'ireo andriamanitra izay miovaova izahay.
Ny zava-miafina ny mistery, ilay Lehibe tsy fantatra, dia tandindona antsika amin'ny alàlan'ny tsy takatry ny saina izay ezahantsika lazaina amin'ny alàlan'ny teny fahatsiarovan-tena. Na dia misy aza ny dikan'io teny io dia mety ho voasinton'ny saina tsotra indrindra, tsy mbola nisy olona niaina akory izay namaha ny misterin'ny fahatsiarovan-tena farany. Mifanohitra amin'izany, raha mbola eo am-pikarohana ny fikarohana ny saina dia lasa lavitra, lalina kokoa, lalina ary tsy manam-petra, mandra-pahatongan'ilay mpikaroka, mandehandeha amin'ny vatany, mijerijery matetika: mandritra ny fotoana fohy, mihoatra ny faritry ny fotoana, eo amin'ny tokonam-baravarana. amin'ny tsy Fantatra, amin'ny fanajana sy ny fanginana, izay toa mivavaka fatratra dia tsy manam-petra. Miova ao anaty tsy hay fehezina, tsy azo ovana, tsy takatry ny saina, mijoro ao ivelan'ny fe-potoana ivelan'ny fe-potoana izy, mandra-pahatongan'ny fahatsapana hafahafa, faniriana hahalala, hahatakatra, hametraka ao an-tsaina izay tsy takatry ny saina, hametraka teny izay tsy azo lazaina, dia mahatonga ny saina hiato ary tsy hahomby ny fahitana. Miverina any amin'ny fanjakana izay voafehin'ny fiheverana ny fetra, mahita ny tenany indray izy ankehitriny, mahatsiaro ny lasa sy ny miandry ny ho avy. Saingy tsy afaka ny tsy hahalala azy intsony izy: ivavahana amin'ny fahatsiarovan-tena araka izay aseho amin'ny alàlan'ny endrika sy fanjakana tsy misy fetra.
Ny fahatsiarovan-tena dia indray mandeha no hita miharihary indrindra, ny tena tsotra, lehibe sy lehibe indrindra. Izao rehetra izao dia antsoina hoe fahatsiarovan-tena. Ny fahatsiarovan-tena dia tsy olana, habaka, na fananana; fa ny fahatsiarovan-tena dia manerana ny toerana rehetra, ary ao anatiny sy manodidina ny ati-dia ny resaka. Tsy miova mihitsy ny fahatsiarovan-tena. Mijanona ho mitovy foana izany. Ny fahatsiarovan-tena dia mitovy amin'ny kristaly translucent, tanimboalom-borona, biby lehibe, olona mendri-kaja, na andriamanitra. Zava-dehibe izay miova tsy tapaka amin'ny toetrany, ny toetra, ary ny haavon'ny fampandrosoana. Ny fahatsiarovan-tena dia hita taratra ary aseho amin'ny alàlan'ny raharaha tsirairay dia tsy mitovy, fa ny fahasamihafana dia tsy misy afa-tsy fahatsiarovan-tena.
Amin'ny alàlan'ny fanjakana sy ny toe-javatra rehetra, ny fahatsiarovan-tena dia iray hatrany. Tsy miova na amin'ny fomba ahoana na amin'ny toe-javatra inona na inona izany fa tsy fahatsiarovan-tena. Ny zava-drehetra, na izany aza, dia mahatsiaro ary voamariky ny fanjakana fito na ny ambaratonga izay antsoina matetika hoe fahatsiarovan-tena, fa raha ny tena izy dia fanjakana ary tsy fahatsiarovan-tena.
Avy amin'ny ambany ka hatramin'ny avo indrindra, ny tanjon'ny fananganana sy ny fanovana raharaha dia ny fananganana endrika sy vatana ary hanatsarana azy ireo ho fiara ho an'ny fanehoana ny fahatsiarovan-tena. Ny toeran'ny toe-javatra dia kilasy na ambaratonga manokana amin'ny fivoaran'ny raharaha. Ireo firenena ireo dia mandrafitra izao tontolo izao manontolo, avy amin'ny resaka fototra tsotra indrindra ka hatrany amin'ny foto-kevitra namboarina izay noforonina andriamanitra avo indrindra.
Ny tanjon'ny fivoarana dia ny fiovan'ny raharaha mandra-pahatongan'ny farany fahatsiarovan-tena. Avy amin'ny toetrany tsy niova voalohany, ny raharaha dia mitohy amin'ny fivoarany mankany amin'ny fahatsiarovan-tena, amin'ny alàlan'ny endriny, ny fitomboana, ny fananganana, ny fahalalana, ny tsy fitiavan-tena, ny maha-Andriamanitra.
Ny toeran'ny olana voalohany dia ny singa na atomika. Eto amin'ity fanjakana ity dia tsy misy endrika ary tsy mahalala afa-tsy ny ambaratonga tsotra indrindra.
Ny toeran'ny toe-javatra faharoa dia mineraly na molekiolika. Tamin'ny voalohany, ny tadio atody, ary noho ny fandrosoana teo aloha dia mitarika atody hafa izay tsy dia mivoatra momba izany. Miaraka amin'izany dia mampifangaro, mionona, manjelatra, amin'ny endrika mivaingana mivaingana azo avy amin'ny mineraly izy, ka lasa mahatsiaro tena tsy mitovy amin'ny atiny. Amin'ny maha atoma azy dia tsy nahatsapa afa-tsy ny fireneny ihany izy, izay tsy nanana fahafahana hampiseho ny fahatsiarovan-tena afa-tsy amin'ny fanjakana tsy misy ifandraisany aminy. Raha vao mitambatra amin'ny atomina hafa ny atody, dia mitombo ny fivoarany mankany amin'ny fahatsiarovan-tena, mitarika ireo atody izay izy no ivony, ary mandalo avy amin'ny fanjakana tsy misy endrika atomika ho lasa fanjakana mitrandraka mineraly, izay mivoatra amin'ny alàlan'ny endrika . Ny harena ankibon'ny mineraly na molekiolika dia manana fiarahana matanjaka amin'ny zavatra fototra ary maneho herisetra mahery vaika rehetra. Io hery io dia aseho ao amin'ny valratra.
Ny toeran'ny laharana fahatelo dia ny legioma na sela. Ny atody izay nitarika ny atomom-be hafa sy tonga molekiola, dia manintona ireo molekiola tsy dia mivoatra ary mitarika azy ireo amin'ny sehatry ny molekiola, izay mamorona ny fanjakam-pianarana mineraly, ao amin'ny sehatry ny sela fanta-daza, mampiavaka ny fanjakànana an-tsaha ary lasa sela. Ny resaka momba ny sela dia mahatakatra amin'ny ambaratonga hafa noho ny resaka molekiola. Raha ny fiasan'ny molekiola dia endrika static, ny fiasan'ny sela dia mitombo amin'ny vatana iray. Eto dia miorina amin'ny fiainana ny raharaha.
Ny toeran'ny toe-javatra fahefatra dia biby na organika. Ny atody izay nitarika ny atody hafa ho any amin'ny fanjakana molekiola, ary avy eo mankany amin'ny fanjakana sela manerana ny fanjakana fambolena legioma rehetra, dia miampatra ho sela ao amin'ny vatan'ilay biby, ary voataonan'ny fahatsiarovan-tena toy ny aseho amin'ny alàlan'ilay biby, miasa ao amin'ny taova iray ao amin'ny biby, dia mifehy ny taova ary miainga any amin'ny toe-javatra biby an-tsaha saina, izany hoe ny faniriana. Avy eo dia mitaky sy mandroso izy, avy amin'ny zavamaniry biby tsotra mankany amin'ny biby be pitsiny sy be pitsiny.
Ny toe-piainana fahadimy dia ny sain'olombelona na I-am-I. Mandritra ny vanim-potoana tsy hita isa, ny atody tsy hita maso izay nitarika ny atomina hafa ho ao anaty mineraly, amin'ny alàlan'ny legioma, ary hatramin'ny biby, amin'ny farany dia mahatratra ny toe-javatra ambony izay ahitana taratry ny fahatsiarovan-tena. Amin'ny maha-tenan'olon-tokana ahy ary manana taratry ny fahatsiarovan-tena ao anatiny, dia mieritreritra sy miresaka momba ny tenany izy, satria izaho no tandindon'ny Iray. Ny vatan'olombelona dia eo ambany fitarihany ny vatan'ny biby voalamina. Ny zavamaniry biby dia manery ny taovany tsirairay mba hanao asa manokana. Ny fiasan'ny taova tsirairay dia mitarika ny sela tsirairay hanao asa sasany. Ny fiainan'ny sela tsirairay dia mitarika ny sela molika tsirairay amin'ny fitomboana. Ny famoronana molekiola tsirairay dia mametra ny atiny tsirairay ho endrika milamina, ary ny fahatsiarovan-tena dia manentana ny atiny tsirairay miaraka amin'ny tanjon'ny fahatokian-tena. Ny ataoma, molekiola, sela, taova, ary biby dia eo ambany fitarihan'ny saina - ny toe-tsaina mahatsiaro tena - fiasan'ny saina. Saingy tsy takatry ny saina ny fahatsiarovan-tena, izay no fivoarany manontolo, mandra-pandresany sy hifehezana ny faniriana sy fihetseham-po rehetra raisina amin'ny alàlan'ny fahatsiarovan-tena, ary mifototra ny eritreritra rehetra amin'ny fahatsiarovan-tena araka ny hita ao aminy. Rehefa izany dia tsy mahalala afa-tsy ny tenany ihany izy; ary ny fanontaniany manokana: iza aho? Afaka mamaly amin'ny fahalalana izany: Izaho no I. Ity dia tsy fahafatesana ity.
Ny zava-misy fahenina dia ny fanahin'olombelona na I-am-You-and-You-ikaw-I. Ny saina rehefa naharesy ny fahalotoana rehetra tao aminy ary nahatratra ny fahalalana an-tena, dia mety hitoetra tsy maty ao amin'ity fanjakana ity izy; fa raha mikatsaka ny tonga saina, dia tonga saina hahatsiaro tena ho hita taratra ao an-tsainan'ny zanak'olombelona tsirairay avy. Miditra amin'ny fomban'ny saina ao anatin'ny sain'olombelona rehetra izany.
Ao amin'ity fanjakana ity ny I-am-You-and-You-art-I dia mandiso ny olombelona rehetra ary mahatsapa ny tenany ho olombelona.
Ny toeran'ny toe-javatra fahafito dia ny maha-Andriamanitra. Ny fanahin’olombelona na I-am-You-and-You-Izaho-dia, manary ny tenany ho tombontsoan'ny rehetra, dia lasa masina izany. Ny maha-Andriamanitra dia mampiray ny olona iray, mitovy amin'ny andriamanitra, ny olona, ​​ny biby, ny zavamaniry, ny mineraly ary ny singa.
Isika dia olona mahatoky tena amin'ny hoe ilay saina iray dia hita taratra ao an-tsaintsika. Saingy ny ao an-tsaintsika dia maneho taratra ny toe-javatra isan-karazany izay hita ho toy ny fihetseham-po sy fanentanana ary filana tsy tambo isaina. Ny fanesorana ny tsy maharitra, ny evanjelana, noho ny fahatsiarovantena mandrakizay tsy miova, dia samy mampiseho ny tenany amin'ny vatana fa tsy amin'ny fahatsiarovan-tena. Io no antony mahatonga ny alahelontsika sy ny fahoriantsika rehetra. Amin'ny alàlan'ny fahatsiarovan-tena ao an-tsaina dia mahafantatra ny mandrakizay ary maniry ny hiray amin'izany, fa ny saina kosa tsy afaka manavaka ny tena marina sy ny diso ary amin'ny ezaka hataony mba hanavakavahana azy. Amin'ny alàlan'ny ezaka mitohy dia hahatratra ny golgotha ​​mijaly ny tsirairay avy amintsika ary hohomboana amin'ny hazo fijaliana eo anelanelan'ny resaka momba ny tany misavoritaka sy ny voninahitr'izao tontolo izao. Amin'io fanomboana io dia hanangana olom-baovao izy, hatsangana amin'ny fahatsiarovan-tena avy amin'ny saina miahy tena manokana, mankany amin'ny maha-olona-anao-ary-anao-maha-olona antsika. Ny nitsanganany tamin'ny maty dia izy no manome aingam-panahy ny ezaka manavao ny fanampiana ny hafa, ary ny mpitari-dàlana amin'ny olombelona rehetra izay mametraka ny finoany amin'ny Iray Fahalalana.